Ahịrị extrusion profaịlụ nke rọba osisi dị mma maka imepụta ọnụ ụzọ, uwe mwụda, ala na profaịlụ mma nke ime ụlọ na n'èzí, pallet na-atụgharị. Ebe ntụrụndụ/ ebe ngosi ihe ngosi.
Ngwakọta osisi plastik osisi (WPC) na -etinye uru nke osisi na plastik, ọ bụghị naanị nwee ọdịdị eke wee merie adịghị ike nke osisi eke, kamakwa jiri osisi yiri ezigbo nhazi nhazi, nke na -eme WPC nwere ike mezue site na iji ngwaọrụ osisi, sawed, planed ma ọ bụ ntu. Ọzọkwa ike njigide siri ike karịa ihe osisi nkịtị. Ọ nwere otu ihe anụ ahụ na arụ ọrụ dị ka osisi siri ike, dị ka nguzogide mkpakọ na nguzogide mmetụta, yana ịdịte aka ya doro anya karịa nke ihe osisi nkịtị. Ngwa WPC na-eguzogide mmiri, nguzogide corrosion na acid siri ike na alkali, ọ dịghị mfe iri nla, nje ma ọ bụ ịka nká; ọ bụghị ogologo ero, mgbochi static, retardant ire ọkụ dị ka nke ọma.
N'oge a, a na -eji WPS eme ihe ndebiri ụlọ, ihe eji egwuri egwu ụmụaka nwere bọọdụ, pallets, igbe mbukota, ngwa nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ, bọọdụ inyeaka ala, ndị na -ehi ụra na ihe nchekwa ndị ọzọ, ala ala, nchekwa, oche oche na ihe ndị ọzọ dị n'èzí; N'ala dị n'èzí, ime ụlọ anwụ, akara, igbe ntụgharị, oche ebe mgbakọ, ibé osisi, wdg.
Enwere ike iji ya ọzọ mgbe agbapụtasịrị, gburugburu f-iendly na akụnụba. Efere anaghị agba nchara ma dịkwa mma maka iji ya.
Njupụta dị ala, ala siri ike, ezigbo ire ụtọ
Katapila traktọ mejupụtara rọba rọba nke nwere ike ichebe elu ire ụtọ nke ngwaahịa. Ọsọ ọsọ na ịbelata ngbanwe mgbanwe na -eme mmekọrịta.
Mbelata njikwa otu site na mmemme Siemens PLC nke nwere ike ijikwa ogologo ịcha ya nke ọma. Mbelata ihe na -etinye ya na akpa mmịpụta.
Jiri traktọ na onye na -egbutu ihe jiri enyo siri ike mee ka satfety nke ndị na -arụ ọrụ dị mma.
Ogologo obosara (mm)
Ike nke ala ala (kw)
Mmiri jụrụ oyi (m3/h)
Nke gara aga: PVC profaịlụ plastik, ahịrị mmepụta ihe
Osote: Ịkwanyere, PVC plastic osisi oghere oghere mmepụta akara
Osisi Plastic Ogwe Extruder
Wpc Board Ime igwe
Ngwa Wpc Extrusion
Line Wepụ profaịlụ Wpc
Line mmepụta Profaịlụ Wpc
Onye Wpc Extruder, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Nweta Wpc, Na -akụpịa igwe ihe, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri,